vim Lesson 1.2 , 1.3 , 1.4 | Tho Hi
vim Lesson 1.2 , 1.3 , 1.4
15/09/2013 by thohi
Vim အကွောငျးမရေးခငျ vim ဆိုတာ terminal ထဲမှာသုံးတဲ့ all-purpose editor တခုပါ။ Linux distro သုံးသူမြား အသုံးမြားဆုံး editor ဆိုရငျမမှားပါဘူး။ သုံးကွည့ျတာကွာလာရငျ ပိုသဘောကလြာမှာပါ။ လှယျကူပွီးမွနျဆနျတာတှေ့ရပါလိမ့ျမယျ။
ဥပမာ။ ။ Terminal ထဲမှာ vim test ဆိုတဲ့ file တခုရှိမယျ (သို့) vim test ရိုကျတာနဲ့ ရှိပွီးသားမဟုတျရငျ file တညျဆောကျသှားပါလိမ့ျမယျ။ အဲဒီ့ဖိုငျထဲမှာ english လိုရေးခငြျတာလေးမြား အစမျးရေးပွီး vim ကိုကလိကွည့ျကွတာပေါ့ 🙂 ။
Vim နဲ့ပကျသကျပွီး အသုံးပွု ပုံလေးတှကေို နညျး⁠နညျးစီရေးသှားပါမယျ။
ဒီနေ့တော့ vim အသုံးပွု ခြိနျမှာ cursorရှေ့ပုံပါ။
vim ထဲမှာ စာလုံးတှကွေား cursor ရှေ့မယျဆိုရငျ h,j,k,l ဆိုတဲ့ keys လေးတှနေဲ့ ရှေ့နိုငျပါတယျ။
h key လေးက ဘယျဘကျကိုရှေ့ခငြျရငျသုံးပါတယျ။ l key ကညာဘကျရှေ့ ၊ k key က အပေါျဘကျရှေ့ ၊ j key က အောကျဘကျရှေ့ ရာတှငျသုံးပါသညျ။ သင့ျအနနေဲ့ အသုံးပွု နရေငျး တခု⁠ခုမသခြောရငျ key ကိုနှိပျလိုကျပါ။ normal mode ကိုပွနျရောကျသှားပါမယျ။ ပွီးမှ လိုခငြျတဲ့ command ကိုပွနျနှိပျနိုငျပါသညျ။ အသုံးပွု ပုံမြားကို ကြှမျးကငြျသညျအထိ လေ့ကငြ့ျကွည့ျပါ။ လကျတှေ့ လိုကျပါလုပျဆောငျကွည့ျတာသခြောပါတယျ။ ဖတျကွည့ျရုံဖွင့ျ မမှတျမိနိုငျပါ။ ခေါငျးစဉျငယျလေးမြားဖွင့ျ ခှဲပွီးရေးပေးပါမညျ။
၁။ vim သုံးနခြေိနျ Normal mode သခြောအောငျ key ကိုနှိပျကွည့ျပါ။
၂။ ပွီးလြှငျ vim test file ကို ဖှင့ျကွည့ျ၍ ရိုကျခငြျတဲ့စာရိုကျကွည့ျပါ။ key နှိပျလိုကျပါ။
၃။ :q! ရိုကျ ပွီးရငျ enter ခလုတျနှိပျပါ။ ဒါဟာ vim editor ပိတျခွငျးနဲ့ နဂို file ကိုမပွောငျးလဲပဲ save မလုပျပဲ ပိတျလိုကျသလိုပါ။
Lesson 1.3: TEXT EDITING – DELETION
** character မြားကို cursor ခပြွီး x key ကိုနှိပျ၍ဖကြျခွငျး**
၁။ —-> The ccow jumpedd ovverr thhe mooon. ဒီစာလေးကို vim test ထဲမှာ ရိုကျလိုကျပါ။ပွီးရငျမလိုတဲ့ စာလုံးတှပွေနျဖွုတျကွည့ျပါမယျ။
၂။ ဖွုတျမယ့ျ စာလုံးပေါျမှာ cursor လေးရောကျအောငျခပြေးပါ။
၃။ ပွီးလြှငျ x key လေးကိုနှိပျလိုကျရုံပါပဲ။
၄။ အပေါျက မလိုတဲ့ စာလုံးလေးတှဖွေုတျပွီးရငျ ဒီစာကွောငျးလေးအတိုငျးရမရ စမျးကွည့ျပါ။
မှတျခကြျအနနေဲ့ကတော့ ဖတျကွည့ျရုံမဟုတျပဲ လကျတှေ့လိုကျစမျးကွည့ျတာ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။
Lesson 1.4: TEXT EDITING – INSERTION
* i key ကိုနှိပျ၍ စာလုံးထည့ျသှငျးခွငျး*
၁။ —>There is text misng this. ဒီစာကွောငျးကို
——> There is some text missing from line. ဒီလိုဖွဈအောငျပွောငျးကွည့ျရအောငျ။
၂။ ပထမ စာကွောငျးကိုအရငျရိုကျပွီး key နှိပျလိုကျပါ။ normal mode ပွနျပွောငျးလိုကျတာပါ။
၃။ ပွီးရငျ စာလုံးထည့ျသှငျးခငြျတဲ့နရောကို cursor ကိုရှေ့ပေးလိုကျပါ။ cursor ရောကျတဲ့နရောမှာ စာထည့ျတော့မယျဆိုရငျ i key လေးနှိပျပွီး လိုတဲ့စာသားထည့ျသှငျးနိုငျပါပွီ။
← ၂၀၁၂ ကိုနှုတျမဆကျခငျ
vim Lesson 1.5 , 1.6 , Lesson 1 summary →